Trump oo sheegay in Masar ay burburin doonto Biyo-xidheenka Itoobiya | Berberanews.com
Home WARARKA Trump oo sheegay in Masar ay burburin doonto Biyo-xidheenka Itoobiya
Madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay hadal guux badan ka kicyay gudaha waddanka Itoobiya. Trump ayaa tilmaamay in Masar ay burburin karto biyo-xidheenka wayn ee ay Itoobiya ka dhinac dhisayso Webiga Nile.
“Ugu dambayntii biyo-xidheenkaas way burburin doonaan. Waan idhi kor ayaanan u leeyahay – biyo-xidheenkaas way burburin doonaan. Waana inay wax sameeyaan,” ayuu sii raaciyay Trump.
Madaxweyne Trump intaas kumuu ekaan ee waxa kale oo uu tilmaamay in Masar ay arrintaasi ka seexatay: “Waa hore in uusan bilaaban ayey aheyd inay joojiyaan,” ayuu yidhi.
Illaa hadda wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Itoobiya ma uu jiro, hasayeeshee ra’iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, Hailemariam Dessalegn, ayaa si cadho leh arrintaas uga falceliyay.
Waxa uu intaasi ku daray inuu ka daray inuu ka xun yahay inuu yidhaahdo hasayeeshee ay dhabta tahay in ninkaasi [Trump] uusan ogayn waxa uu ku hadlayo.
Previous articleMadaxweyne Biixi oo xil-ka-qaadis oyo magacaabid ku sameeyay Xukuumaddiisa
Next articleDabaysha isbedelka siyaasadeed ee Bariga Dhexe Sudan iyo Masar